Polytechnique Vontovorona (ESPA) : Hotohanan’ny minisiteran’ny Angovo -
AccueilRaharaham-pirenenaPolytechnique Vontovorona (ESPA) : Hotohanan’ny minisiteran’ny Angovo
Araka ny fanazavan’ny talen’ny sekoly ambony Polytechnique eny Vontovorona, ny Profesora Yvon Andriamaharison, dia hiara-hiasa amin’ireo minisitera maromaro eto Madagasikara izy ireo.
Namaly ny antson’ny sekoly Polytechinque Vontovorona voalohany kosa ny teo anivon’ny minisiteran’ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’afo (MEEH). Efa tontosa mantsy ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasan’ny roa tonta.
Araka izany, nisy ny fampisehoan’ireo mpianatra teo anivon’ity sekolim-panjakana ambony eny Vontovorona ity ireo tetikasa nokarohina sy noforonin’izy ireo, izay niompana tamin’ny angovo, omaly. Anisan’izany ny tetikasa fianarana mitondra fiarakodia amin’ny alalan’ny “logiciel” voatokana ary tsy manimba ny tontolo iainana. Teo ihany koa ny fampisehoana ny “traker solaire”, famadihana ny lomotra ho solika, ny fampirehetana jiro amin’ny alalan’ny tehaka tsotra, ny printy 2D sy 3D, sns.
Raha ny fanazavana, dia mamoaka tetikasa miisa 250 eo ho eo ireo mpianatra mpikaroka eny amin’ny sekoly Polytechnique Vontovorona. Fa ho an’ny fampisehoana omaly kosa, dia hatolotra ny minisitera ireo tetikasa noforonin’ireo mpianatra, ary hisy ny fanampiana avy amin’ny MEEH hanatsarana ireo tetikasa ireo. Hisy ihany koa ny fiarovana ireo tetikasa noforonin’ireo mpianatra mpikaroka, sns.
Nambaran’ny avy eo anivon’ny MEEH kosa fa ho matotra ny fiaraha-miasa eo amin’ny sekoly ambony Polytrechnique Vontovorona sy ny minisitera. Hisy, araka izany, ny fijerena manokana ireo tetikasa noforonin’ireo mpianatra.
Fa anisan’ny tena nanaitra ny maro kosa ny fampisehoan’i Ny Aina Henintsoa Ranaivojaona sy Ny Avo Ortega, mpianatra elektrônika eo anivon’ny ESPA Vontovorona ny tetikasa noforoniny atao hoe “Tracker Solaire”.
Izany hoe, tetikasa noforonin’izy mianadahy izy io ho fampandrosoana an’i Madagasikara eo amin’ny filàna amin’ny angovo. Fitaovana iray mamokatra herinatra azo avy amin’ny masoandro ity noforonin’izy mianadahy ity. Manaraka ny fikisaky ny masoandro ilay fitaovana, izany hoe, afaka mihodina ao anatin’ny 90° amin’izay hametrahana azy hanaraka ny fikisaky ny masoandro.
Nohazavain’izy ireo, araka izany, fa mampitombo 45%-n’ny angovo azo avy amin’ny “panneau solaire” tsotra ity fitaovana vitan’izy mianadahy ity. Voalaza fa tombony ho an’ny firenena izany fikarohana izany, satria tsy mandany mihoatra ny fampiasana solika ity vokatra ity.